Famerenana fitaovam-piadiana :: Basy mahery vaika sy bala maromaro azo tany Isandra • AoRaha
Famerenana fitaovam-piadiana Basy mahery vaika sy bala maromaro azo tany Isandra
Mitohy ny hetsika natao hiantsoana an’ireo mpitazona fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna mba hamerina azy ireny any amin’ny mpitandro ny filaminana. Misesisesy ny fahenoana ny vokatra azo avy amin’izany hetsika izany. Basy mahery vaika « Kalachnikov » roa sy « MAS 36 » iray ary basy lava roa vita tanana miampy bala roa amby telopolo indray no voarain’ny mpitandro ny filaminana tany Isorana distrikan’Isandra, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Heverina hatrany fa tafaverina avy tany am-pelantanan’ny olon-dratsy ireo fitaovam-piadiana ireo.
Vokatry ny fanentanana nataon’ny zandarimaria avy ao amin’ny faritany Fianarantsoa ary narahan’ny ezaka tamin’ ny asa nataon’ireo miaramila mamita iraka any an-toerana no nahitana an’ireto basy dimy sy bala maromaro ireto. «Nisy ny fanentanana amin’ny famerenana ny basy tsy ara-dalàna rehetra. Nisy dahalo vitsivitsy namerina izany an-tsitrapo.
Nilaza ny hiova fo tsy hanao ny asa ratsiny intsony izy ireo. Milaza ny hamerina ny fitaovam-piadiana ampiasainy ihany koa ny ankamaroan’ ny dahalo any Isandra. Mitohy hatrany ny fanentanana », araka ny fanampim-baovao. Raha ny tokony ho izy dia mila mivoatra manaraka an’izao hetsika izao ny fanisana indray ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanan’ ny mpitandro ny filaminana rehetra. Tsara raha ao anatin’ ny mangarahara no haha- fantarana ny zava-misy mba hisian’ny fiaraha-mientana amin’ny famongorana ny asan-jiolahy sy asan-dahalo, indrindra hiadiana amin’ ireo mpiray tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy amin’ ny alalan’ny famarotana na fampindramana fitaovam-piadiana amin’ireny mpandroba ireny.
Loza goavana teny amin’ny by-pass :: Karohina ny mpamily taksibe nahafaty olona telo
Voina an-drano :: Hita faty ilay zazalahy efa nokarohina